၁ ဧပြီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဧပြီလ၊ (၁)ရက်နေ့ သည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ တစ်နှစ်တာ၏ (၉၁)ရက်မြောက် (ရက်ထပ်နှစ်ဖြစ်လျှင် (၉၂)ရက်မြောက်)) နေ့ရက် ဖြစ်သည်။ ယင်းတစ်နှစ်တာ ကုန်ဆုံးရန် ရက်ပေါင်း (၂၇၄) ရက် ကျန်သေးသည်။
၁.၁ ၁၆၀၀ ခုနှစ် မတိုင်မီ
၁.၂ ၁၆၀၀ ခုနှစ်မှ ၁၉၀၀ ခုနှစ်ထိ
၁.၃ ၁၉၀၀ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ
၁၆၀၀ ခုနှစ် မတိုင်မီ[ပြင်ဆင်ရန်]
၃၃ – သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦး၏ မှတ်တမ်းများအရ ယေရှုခရစ်တော်၏ နောက်ဆုံးညစာစားပွဲအား ကျင်းပခဲ့သည်။
၅၂၇ – ဘိုင်ဇန်တိုင်း အင်ပါယာပြည့်ရှင် ဂျက်စတင်း ၁ သည် သူ၏ တူတော် ဂျက်စတင်နီယန် ၁ကို တွဲဖက်အင်ပါယာပြည့်ရှင်ဟု အမည်ပေးခဲ့ပြီး ထီးနန်းကို ဆက်ခံစေခဲ့သည်။
၁၅၄၅ – ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ၊ ပိုတိုဆီမြို့ကို ကြီးမားသော ငွေသတ္ထုသိုက်များအား တွေ့ရှိပြီးနောက် ထိုဧရိယာတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
၁၅၇၂ – နှစ်ရှစ်ဆယ် စစ်ပွဲအတွင်း Watergeuzen တို့သည် ပြည်နယ် ၁၇ ခုမှ ဘရီလယ်မြို့အား တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းအား ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဒတ်သမ္မတနိုင်ငံတော်အတွက် ပထမဆုံးသော ခြေကုပ်ကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
၁၆၀၀ ခုနှစ်မှ ၁၉၀၀ ခုနှစ်ထိ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၆၂၅ – ဒတ်ချ်-ပေါ်တူဂီ စစ်ပွဲအတွင်း သင်္ဘော ၅၂ စီး ပါဝင်သော တပ်ပေါင်းစုကြီးသည် ဘာဟီးယားမြို့အား ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခြင်းအား စတင်ခဲ့သည်။
၁၇၈၉ – နယူးယောက်မြို့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အောက်လွှတ်တော်သည် ပထမဆုံးအကြိမ် အစည်းအဝေးအထမြောက်နိုင်သောဦးရေဖြင့် အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖရက်ဒရစ် မူလန်ဘတ် အား အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
၁၈၃၃ – မက်ဆီကန်အစိုးရအား အသနားခံစာတွဲမူကြမ်းအား အကောင်အထည်ပေါ်စေရန် မက်ဆီကန် တက္တဆပ်တွင် နေထိုင်သူများ၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ စုဝေးမှုအဖြစ် ၁၈၃၃ ခုနှစ် ညီလာခံကို ဆန် ဖီလစ်ပီ ဒီ ဩစတင်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
၁၈၆၅ – အမေရိကန် ပြည်တွင်းစစ်: ဖီလစ် ရှယ်ရီဒန် ဦးဆောင်သော ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်မှ ‌ဂျော့ ပစ်ကပ် ဦးဆောင်သော ကွန်ဖက်ဒရိတ်တပ်အား ပြတ်ပြတ်သားသား ရှုံးနိမ့်စေခဲ့ပြီး မြောက်ပိုင်းဗာဂျီးနီးယားတပ်၏ နောက်ဆုံးသော ထောက်ပံ့ရေးလိုင်းအား ဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၈၆၇ – စင်ကာပူသည် ဗြိတိသျှမှ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်သော ကိုလိုနီနယ်(crown colony) တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၈၇၃ – White Star သင်္ဘောလိုင်း၏ သင်္ဘောတစ်စီးဖြစ်သော အတ္တလန်တစ်သင်္ဘောသည် ကနေဒါနိုင်ငံ၊ နိုဗာစကိုးရှားပြည်နယ်အနီးတွင် နစ်မြုပ်ခဲ့ပြီး လူ ၅၄၇ ဦး သေဆုံးခဲ့ရာ ၁၉ ရာစုနှစ်တွင် ရေကြောင်းဆိုင်ရာဘေးဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
၁၉၀၀ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Humphreys၊ Colin J. (2011)။ The Mystery of the Last Supper။ Cambridge University Press။ pp. 77 and 189။ ISBN 978-0521732000။
↑ Jesus Christ's Last Supper 'was onaWednesday' (April 18, 2011)။
↑ Multiple Authors (17 September 2013)။ Early Modern Wars 1500–1775။ Amber Books Ltd။ p. 97။ ISBN 978-1-78274-121-3။
↑ Infantry။ U.S. Army Infantry School။ June 2011။ p. 45။
ယနေ့ - ၆ ဇူလိုင်၊ ၂၀၂၂ [ရှင်းသန့်]
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၁_ဧပြီ&oldid=655765" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ မေ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။